Soomaaliya oo ka qayb gashay wejiga afaraad ee shirka deyn cafinta. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Soomaaliya oo ka qayb gashay wejiga afaraad ee shirka deyn cafinta.
Soomaaliya oo ka qayb gashay wejiga afaraad ee shirka deyn cafinta.
Wasiirka Maaliya Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane C/raxmaan Ducaale Beyle iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa magaalada Adis-Ababa ee dalka Itoobiya kula kulmaya kooxda wadahadalka deyn cafinta u qaabilsan hey’adda Lacagta Aduunka (IMF) xilli uu socdo wadaxaajoodka Wejiga afaraad ee Barnaamijka deynta cafinta Soomaaliya ee loogu yeero (SMP4).
Waxaa si gaar looga hadlayaa kulanka wixii Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ay ka qabatay sadexdii bil ee la soo dhaafay shuruudaha ku xeran wada hadalka deynta cafinta wajiga afaraad .
Previous articleMadaxweynaha Dowladda Falastiin oo Ku hanjabay inuu Ka bixi doona Heshiisyadii Ay Israa’iil la Galeen
Next articleWasiirka amniga XFS oo ka hadlay amniga Galmudug.